Partenit esigodini olunothile esinqeni Ayu-Dag, esimelela esabekayo phezu oluseningizimu ye-eCrimea, ukusakaza iphendukele emzaneni ezisemadolobheni Partenit. Izibuyekezo zezivakashi waqinisekisa ukuthi resort - lokhu kungenye indaba Crimean lapho ufuna ezibuya unyaka nonyaka zizé. Igama layo livela egameni lesiGreki "parthenos", okusho ukuthi "intombi nto." Yiqiniso, yena unalo izici ezimbalwa, nge ncazelo, ngeke asondele igama elithi "intombi nto", ngaphandle kokuthi umoya ohlanzekile, enhle njengoba izimila zasentabeni kanye microclimate esiyingqayizivele lakheka ngokubizwa belingana kwencazelo "uhlobo isetshenzwe".
Partenit okuhlukana Big Yalta Big Alushta. Ezinhlangothini ezintathu ke ivikelwe ezintabeni, ngakho kukhona njalo ezolile futhi windless. Kufeza indima ebalulekile ekukhethweni nazo zonke ezinye iyindawo, njengoba Partenit zokuhlala. Izibuyekezo mayelana nokuhlala kule ndawo yeholide abonisa ukuthi izinkumbulo ahlale emnandi kunazo: ukungcebeleka emaphandleni olunothile, zonke izinhlobo hambo ezithakazelisayo, ebhukuda olwandle ecacile futhi ukuphumula amabhishi omangalisayo.
Ngaphambi kokuqhubeka incazelo Idolobha lanamuhla, ngifuna ukusho ezimpandeni zakhe. I ngomlando walo mzana itholakala ngokuba sibuyele emuva esikhathini eside esadlulako. Ngenxa rannepaleoticheskih ukutholakala amathuluzi singaphetha ngokuthi abantu kule ndawo wahlala kusukela Stone Age.
Partenit yanamuhla yokungcebeleka edume lapho ukuzilibazisa kubhekwa ngempela ehlonishwayo. Kunezinhlobo eziningana yangasese boarding izindlu zokungcebeleka eziningi ezinkulu. Nakuba iholidi baye edolobhaneni Partenit, ubufakazi bangempela, awukwazi nje uphumule, kodwa futhi ukuze bathuthukise impilo yabo, sithole amandla. zokungcebeleka Modern zitholakala ngqo ogwini. Sanatoriums babe amabhishi abo ukhululekile futhi ihlanzekile. Phakathi ezithandwa kakhulu kulesi sibhedlela "eCrimea" ogama indawo unyaka wonke Dolphinarium ukusebenza. Kufanele kuqashelwe ethokomele futhi yesimanje iholide ekhaya "Flamingo", okuyinto isakhiwo ezintathu storey nge amakamelo elikhanyayo futhi ivulekile. Angazamukela futhi ekhaya ukuphumula "Ayvazovskoe", esemgwaqweni phakathi iCape enamadwala Plaka kanye Bear Intaba. Yiqiniso, indima enkulu ekukhetheni indawo yokubeka play, phakathi ngamaholide edolobhaneni Partenit, amanani. Umkhakha wangasese inganikeza yokuhlala ukonga ngaphezulu.
Kwathi sizipholele e Partenite kumelwe nikhumbule izindawo kuwufanele ukuvakashelwa. Ngakho, phakathi headlands Plaka Tepeler welulela ayetholakala epaki Ayvazovski, ogama ndawo 18 m. Kukhona phakathi kwensimu yeminqumo zemithi ezishiywe ukufinyelela engu-200 ubudala. Labo bahlala edolobhaneni Partenit, kuleli paki ushiye Izibuyekezo rave kuphela. Kukhona imithombo eminingana amahle, okuyizinto ukubaza olufakiwe futhi emachibini amancane. I avakashelwa kubhekwa umthombo zomculo nge ebaziwe ka Prometheus. Ngenxa yalokhu izinto ozama ukuthatha isithombe cishe yonke amaholide.
Makalale Partenit ngeke ephelele ngaphandle ebhishi, lapho ungakwazi ukujabulela ilanga nolwandle ukugeza. Kukhona anhlobonhlobo amanzi ezemidlalo. Ungakwazi ukugibela isithuthuthu, jet ski, isikebhe, "banana" esikebheni ezihlekisayo, noma isikebhe. Ngaphansi kokuqondisa ngomfundisi abanolwazi, ungakwazi ngena ngaphansi kwamanzi diving, ukubona ubuhle olwandle nabakhileyo kuwo. Ngaphezu kwalokho, amaholide inikeza Ukukhetha enkulu zonke izinhlobo hambo ngesikebhe.
Ebhakedeni Skhodnenskiy (Skhodnenskaya isitsha) - lesikhumbuzo bemvelo kanye nomlando
Trostenskoe echibini. Beka ukudoba nomndeni amaholide.
Umbolekisi Private - indoda okungekho inzuzo ukuba abambisane?
Yeka ukuthi kuhle kanjani ukuba tie izintambo zezicathulo ku amateki: ongakhetha zikanokusho engavamile